भारत र चीनसँगको सीमामा सशस्त्र प्रहरी थप्ने क्रम सुरु भयो : गृहमन्त्री
काठमाडौँ, १६ पुस । भारत र चीनसँगको सीमानामा सशस्त्र प्रहरी चौकी थप्ने काम सुरु भइसकेको गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले बताएका छन् ।
धारिलो हतियार प्रहार गरी घाइते बनाएको अभियोगमा पक्राउ
सुनसरी, १६ पुस । धरान उपमहानगरपालिका–१६ डेरा गरी बस्ने पोखरा महानगरपालिका–६ घर भएका २८ वर्षीय बिश्वास गुरुङलाई धारिलो हतियार प्रहार गरी घाइते बनाएको अभियोगमा सोही स्थान डेरा गरी बस्ने २७ वर्षीय राजेश नेपालीलाई बुधबार बिहान प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
नक्कली सुनलाई सक्कली सुन भनी कारोबार गर्ने ३ जना पक्राउ
कैलाली, १६ पुस । धनगढी उपमहानगरपालिका–४ बसपार्कस्थित नेशनल गेष्ट हाउसबाट नक्कली सुनलाई सक्कली सुन भनी कारोबार गर्ने ३ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय समकक्षी मोदीबीच शुभकामना आदान–प्रदान
काठमाडौं, १६ पुस । प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच अँग्रेजी नयाँ वर्ष २०२० को अवसरमा शुभकामना आदान–प्रदान भएको छ ।
किसानको पीडामा सरकारको संवेदनशीलता खोई ? : डा.आचार्य
काठमाडौं, १६ पुस । विगत एक सातादेखि भुक्तानी माग गर्दै काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलनका उखु किसानको पीडामा सरकारको संवेदनशीलबारे साझा पार्टीका प्रवक्ता डा.सूर्यराज आचार्यले प्रश्न उठाएका छन् ।
जनकपुर अञ्चल अस्पताललाई नमूना अस्पताल बनाउन मुख्यमन्त्री लालबाबुको निर्देशन
जनकपुरधाम, १६ पुस । मुख्यमन्त्री मो.लालबाबु राउत गद्दीले प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरलाई नमूना अस्पताल बनाउने गरि कार्य योजना तयार पार्न अस्पताल प्रशासनलाई निर्देशन दिएका छन् ।
इटहरी उपमहानगरद्वारा ६० महिला फुटबल खेलाडी उत्पादन
सुनसरी, १६ पुस । इटहरी उपमहानगरले ६० जना महिला फुटबल खेलाडी उत्पादन गरेको छ । एक महिनासम्म तालिम प्रदान गरेर महिला खेलाडी तयार गरेको हो ।
अंग्रेजी नयाँ वर्षको दिनमा नेपालमा १,५०० भन्दा बढी शिशु जन्मिने : युनिसेफ
काठमाडौं, १६ पुस । अंग्रेजी नयाँ वर्षको दिनमा नेपाल भर १,५६७ शिशु जन्मिने अनुमान गरिएको युनिसेफले जनाएको छ ।
भरतलाल तथा पुष्करलालका नाममा अवार्ड घोषणा
काठमाडौं, १६ पुस । सुप्रसिद्ध समाजसेवी तथा व्यवसायीस्व. भरतलाल श्रेष्ठ र बहुचर्चित पत्रकार तथा सञ्चार उद्यमी स्व. पुष्करलाल श्रेष्ठको नाममा कामना न्यूज पब्लिकेसन्स प्रालिले सम्मान अवार्ड स्थापना गरेको छ ।
आफ्नै छोरीलाई कुटपिट गरी हत्या गरेको अभियोगमा पक्राउ
कञ्चनपुर, १५ पुस । आफ्नै ४ वर्षीया छोरी सुशिला चुनारालाई कुटपिट गरी हत्या गरेको अभियोगमा भिमदत्त नगरपालिका–१८ सुकुम्बासी टोल बस्ने ३० वर्षीय ईन्द्र बहादुर चुनारालाई सोमबार साँझ प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
बाँके, १५ पुस । नेपालगंज उपमहानगरपालिका–२० स्थित सडकमा कोहलपुरबाट नेपालगंजतर्फ जाँदै गरेको भे.८ प ४६४ नम्बरको मोटरसाइकल मंगलबार बिहान दुर्घटना भएको छ ।
भ्रमण वर्ष घोषणामा सहभागी हुन भारतका पर्यटनमन्त्री काठमाडौंमा
काठमाडौं, १५ पुस । नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को पूर्वसन्ध्यामा छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतका पर्यटनमन्त्री काठमाडौं आइपुगेका छन् ।
भारतीय राजदूत पुरी दिल्ली फर्किदैं
काठमाडौं, १५ पुस । नेपालका लागि भारतीय राजदूत मञ्जीवसिंह पुरी कार्यकाल सकेर दिल्ली फर्किँदै छन् । उनले नेपालमा दुई वर्ष नौ महिना तीन दिन बिताएका छन् ।
नेपालगञ्ज, १५ पुस । नेपालगञ्जका एक समाजसेवीले बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिकाका विद्यार्थीलाई न्यानो कपडा वितरण गरेका छन् ।
कैलाली, १५ पुस । धनगढी उपमहानगरपालिका–४ बस्ने महेश पोखरेलको स्टोरमा आगलागी भएको छ ।
२०१८–१९ मा भारत नेपालको ठूलो व्यापारिक साझेदार
काठमाडौं, १५ पुस । सन् २०१८–१९ को वार्षिक व्यापारका आधारमा भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदारको आफ्नो पूर्ववत् स्थान कायम राखेको छ ।
‘उखु किसानमाथिको शोषण घिन लाग्दो अत्याचार’
काठमाडौं, १५ पुस । पूर्वमहान्यायाधीवक्ता डा. युवराज संग्रौलाले उखु किसानमाथिको शोषणलाई घिन लाग्दो अत्याचारको संज्ञा दिएका छन् ।
उखु किसानको समस्या समाधान गर्न मानवअधिकार आयोगको निर्देशन
काठमाडौं, १५ पुस । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आन्दोलनरत उखु किसानको समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
नेपालद्वारा गृह जिल्लामा विपन्नलाई कम्बल वितरण
रौतहट, १५ पुस । नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले आफ्नो गृह जिल्लाका चिसो प्रभावित विपन्न नागरिकलाई न्यानो लुगा वितरण गरेका छन् ।
नर्थ बंगाल कन्क्लेभमा पर्यटन विकास गर्ने प्रतिबद्धता
दमक, १५ पुस । नेपाल, भारत, भुटान र बंंगलादेशका व्यवसायी, पर्यटनकर्मीले चारदेशीय पर्यटन विकासमा लाग्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
उद्योगी व्यपारीको पक्षमा सरकारले काम गरेको छैन : ढकाल
कपिलवस्तु, १५ पुस । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले वर्तमान सरकारले आम उद्योगी तथा व्यपारीकहरुको पक्षमा काम नगरेको बताएका छन् ।
चितवनबाट २ चिनियाँ पक्राउ
चितवन, १४ पुस । काठमाडौंको बूढानीलकण्ठबाट १२२ चिनियाँ नागरिक पक्राउ परेको केही दिनपछि ह्याकरको आशंकामा प्रहरीले चितवनबाट २ चिनियाँ नागरिक पक्राउ गरेको छ ।
राजदूत पुरीलाई अभिनन्दन एवं बिदाई
काठमाडौं, १४ पुस । नेपाल–भारत मैत्री संघले नेपालका लागि भारतीय राजदूत मंजीब सिंह पूरी र उनका श्रीमती नम्रता सिंह पूरीलाई अभिनन्दन एवं बिदाई गरेको छ ।
कपिलवस्तुका–१ का अध्यक्षद्वारा १०१ जनालाई कम्बल वितरण
कपिलवस्तु, १४ पुस । कपिलवस्तु जिल्लाको कपिलवस्तु नगरपालिका वडा नं. १ का वडा अध्यक्ष सुदिप पौडेलको अध्यक्षतामा गरिब, असहाय तथा विपन्न बृद्धबृद्धाहरुलाई जाडोबाट बच्नका लागि १०१ जनालाई कम्बल वितरण गरिएको छ ।
कटुवा पेस्तोल र गोलीसहित तीन जना पक्राउ
मोरङ, १४ पुस । बेलबारी नगरपालिका–५ कसेनी रामपुरबाट कटुवा पेस्तोल १ थान, गोली २ थान, सिमकार्ड १८ थान, मोबाइल ८ थान र विभिन्न पम्पेलट २ हजार १ सय थानसहित तीन जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।